Somaliland oo xaqiijisay kiisas cusub oo Covid-19 & Wararkii ugu… | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Somaliland oo xaqiijisay kiisas cusub oo Covid-19 & Wararkii ugu…
Somaliland oo xaqiijisay kiisas cusub oo Covid-19 & Wararkii ugu…
Hargeysa (Halqaran.com) – Somaliland ayaa Sabtida maanta ah ka warbixisay xaaladihii ugu dambeeyay ee deegaanadeeda laga diiwaangeliyay sideed iyo afartankii saac ee la soo dhaafay.
Wasaaradda Caafimaadka Somaliland ayaa waxay sheegtay in xanuunka laga helay 29 qof, ka dib markii laga baaray 150 qof oo kala joogga deegaano kala duwan.
Mid ka mid ah bukaanada xanuunka laga helay waa muwaadin u dhashay dalka India.
Sidoo kale, wasaaradda Caafimaadka ayaa sheegay in la diiwaangeliyay dhimashada laba bukaan oo cusub, oo midi ay tahay haweeney. Guud ahaan dadka xanuunka ugu dhintay deegaanada Somaliland waa 24 qof.
Somaliland ayaa sidoo kale diiwaangelisay in 5 bukaan oo cusub ay ka bogsadeen xanuunka, kuwaa oo dhammaantood ah dadka reer Somaliland ah.
Tani waxay ka dhigeysaa tirada guud ee ka caafimaaday 62 qof.
Bukaanada cusub ee xanuunka laga helay waxaa ay da’doodu u dhaxeysaa
(10jir illaa 19jir = 1 qof)
(20jir illaa 29jir = 7 qof)
(30jir illaa 39jir = 8 qof)
(40jir illaa 49jir = 4 qof)
(50jir illaa 59jir = 1 qof)
(60jir illaa 69jir = 5 qof)
(70jir illaa 79jir = 2 qof)
(80jir illaa 89jir = 1 qof)
Bukaanadan cusub 19 ka mida waxaa weeye rag, 10 kalana waxaa weeyaan dumar, sida ay xaqiijisay Wasaaradda Caafimaadka Somaliland.
Sidoo kale 13 ka mida bukaanada waxaa ay degan yihiin Magaalada Hargeysa, 11 Burco, Berbera 3, Buuhoodle 1 iyo Gabiley oo 1 ah.
Cudurka COVID-19 ayaa maalinba maalinta ka dambeysaa ku sii fidaaya geyiga Soomaalida, taasoo ay ugu wacan tahay dadka oo lagu dhaliilo inaanay u diyaarsanayn ka taxadarka xanuunka.